Chief Auditor | Ve Ve Soft Drinks Factory ﻿
19.4.2020, အချိန်ပြည့် , FMCG
- ကုမ္ပဏီ၏ ၀င်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ်များ အား မှန်ကန်မှု ရှိစေရန် ပုံမှန်စစ်ဆေးပေးခြင်း။
- စစ်ဆေးခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနှင့် တာဝန်ယူစစ်ဆေးပေးခြင်း။
- ရုံးခွဲများ၏ စာရင်းများအား စာရင်းမူဝါဒနှင့် အညီ မှန်ကန်အောင် တည့်မတ်ပြုပြင်ပေးခြင်း။
- ရံဖန်ရံခါ မသမာမှုရှိခြင်း ၊ လျော့နည်း ပျောက်ဆုံးမှုရှိခြင်း တို့ကို စစ်ဆေးသည့်ကိစ္စရပ်များတွင် ဦးဆောင်စစ်ဆေးပေးခြင်း။
- Management ၏ ညွှန်ကြားချက်များအား လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
- CPA/B.Com (or) Accounting degree holder (or) Any Graduate with CAT (or) ACCA (II)
- Between 30 to 40 years old
- Minimum5years working experience, particularly in auditing
- Good leadership & time management skills
- Strong analytical skills and excellent problem solving abilities
- Computer literacy must include MS Excel, Word and PowerPoint
ကျွန်တော်တို.ကမ်းလှမ်းသည် - Attractive Salary
- Meal & Ferry Provide
အလုပ်တည်နေရာ No(116), A-2, Kanaung Min Gyi Road, Shwe Pyi Thar. Industrial Zone (1) , Yangon, Myanmar.
Company Industry: chief auditor
FMCG jobs FMCG jobs chief auditor မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်များ၊ ရန်ကုန်ရှိအလုပ်များ
Yangon (Rangoon) 562 နေ့များ
Mandalay City 678 နေ့များ
Mandalay Region 715 နေ့များ